प्रदेश ७ को नाम सेती महाकाली !
धनगढी- प्रदेश ७ सरकार गठन भएको झण्डै चार महिना पुग्नै लाग्दा सम्म पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेपछि त्यसबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल बहस हुन थालेको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीको बिषयमा त्यती चर्चा नभए पनि प्रदेशको नामाकरणका बारेमा भने बिभिन्न स्तरमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको हो । सरोकारवाला संघ सस्थाले कार्यक्रमनै आयोजना गरेर नाम र राजाधनीका बारेमा छलफल हुन थालेको छ भने त्यो भन्दा बढी चर्चा परिचर्चा सामाजिक सञ्जाल हुन थालेको छ ।
सत्तारुढदलका नेताहरुले स्थायी राजधानी धनगढी या अत्तरीया मध्ये एक ठाउमा हुने बारेमा बोलिसकेका छन् भने नामाकरणका बिषयमा भने कोही बोलेका छैनन् । प्रदेश ७ सरकारले आन्तरिक रुपमा स्थायी राजधानी र नामाकरणका बारेमा छलफल गरिरहेको भए पनि टुंगोमा भने पुग्न सकेको छैन ।
आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रकाश बहादुर शाहले नामाकरण र स्थायी राजधानीका बारेमा आन्तरिक छलफल चलिरहेकोले चाँडै टुंगोमा पुग्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद् श्रोतका अनुसार चार/पाँच वटा नाममा छलफल भइरहेको छ । छलफल भएका नामहरुमा सेती महाकाली, खप्तड, अपी खप्तड, अखण्ड सुदूरपश्चिम, मानसखण्डलगायतका छन् । मन्त्रिपरिषद् नामाकरणका बारेमा टुंगोमा नपुगिसके पनि 'सेती महाकाली' प्रदेशमा सहमती जुट्ने संभावना बढी रहेको मन्त्रिपरिषद् श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कैलाली कञ्चनपुरस्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा थारु अगुवाहरुले भने प्रदेशको नाम 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' राख्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले पनि प्रदेश-७ को नाम अखण्ड सुदूरपश्चिम नै राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने- 'हामी पहिचान र हक अधिकारको लागि ठूला–ठूला आन्दोलन गर्‍यो । तर हाम्रो पहिचान के ? 'कि त हामी नेता नजन्माएर हो कि, भएका जति गतिला नभएर हुन् ।' उनले प्रदेश नामाकरणवारे धेरै नाम आएको बताउदै भने- 'यहाँ अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको मर्म मात्रै समेटिएकोले नामाकरण पनि त्यसैको आधारमा गरिनुपर्छ ।'
खसआर्य र थारु समुदायको मिश्रति बसोबास रहेको प्रदेश ७ को नाममा बिभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । संविधानतः प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेछ ।